Ụbọchị My Pet » Member Safety bụ anyị n'elu priority
Online nchekwa bụ mgbe niile na-ebute ụzọ uche anyị, n'ihi ya, anyị chọrọ na-echetara gị nke ihe niile anyị na-eme ka anyị òtù mma na obi sie gị na anyị na-na-na na-agba mbọ iji na-enye gị ndị kasị dịrị nchebe na o kwere omume online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na ahụmahụ.
Ebe a bụ ihe anyị na-eme…
Itinye ego na ụlọ ọrụ na-eduga mgbochi scammer technology
Scammer usoro na-aghọ elu ndị ọzọ na-esiwanye ike ime ịnọ. Ma anyị na-eme ihe niile anyị nwere igbochi ha.
Anyị na-e-eji mgbochi scammer technology Scamalytics maka 2 afọ ugbu a. The ngwá ọrụ mbak scammer data gafee online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụlọ ọrụ ma na-enyere anyị otu nke zụrụ moderators ntụpọ scammers na-ewepụ ha si DateMyPet.com ọbụna tupu ha na-emetụta anyị so. Scamalytics nwekwara akpaaka-achọpụta rụọ scammers na ewepu bots, nakwa dị ka na-enye anyị otu na 'n'okpuru hundu' ọmụma na-adịghị anya ka mmadụ anya.
Burugodị na a na ihe ọmụma, anyị ahịa ọrụ otu egwuregwu na-mma enịm ka ịnọ scammer na ọnọdụ na-ewepụ ha ngwa ngwa.
Aga n'ihu ọzụzụ maka anyị ahịa ọrụ ìgwè
Anyị bụ ndị otu n'ime nanị ụlọ ọrụ ndị ụlọ ọrụ nke anyị na-ụlọ ahịa ọrụ otu egwuregwu, na raara onwe ya nye so support ìgwè imeru ihe n'ókè na ahịa na-elekọta. Anyị otu nke 60 ọrụ 24 awa ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu, 365 ụbọchị otu afọ iji nye na oge-mpaghara na-elekọta anyị na-òtù gburugburu ụwa.
Anyị jide mgbe nile na-aga n'ihu ahịa lekwasịrị anya ọzụzụ, aiming nọgidere mma na ọrụ anyị na hụ na nchekwa nke anyị na ndị òtù.
Fast imeru ihe n'ókè ụfọdụ
Anyị zụrụ azụ ruo n'ókè kwesịrị ekwesị ìgwè ihuenyo niile ọrụ-eme ọdịnaya iji gosi profaịlụ osụk bụ ezigbo. Nke a na-agụnye ịtụle foto, profaịlụ, dayari ndenye, videos na mbụ onwe ozi iji hụ otu na-eru eru ibiere na-zutere na nke onye saịtị ma ọ bụ na netwọk.
Na-imeru ihe n'ókè ụfọdụ n'okpuru kacha 10 nkeji lekwasịrị, anyị imeru ihe n'ókè otu nwere anya visibiliti nke ihu ọma ugboro otú ha nwere ike nyochaa ha ọrụ nile ha nnofega. Imeru ihe n'ókè ụfọdụ nwere ugbu a na ihe dị ebube na 7.5 nkeji!
Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-azụ na-enye nkwado na ndụmọdụ
Nakwa dị ka na-enye elu àgwà ndị ahịa na-elekọta ndị niile anyị ọrụ, anyị otu na-eme ihe dị ka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-azụ, -enyere òtù na-enwe teknuzu akụkụ ma ọ bụ onye na-enwechaghị ahụmahụ online daters iji nweta ọtụtụ ihe ha mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ahụmahụ.
The ahịa na-elekọta ìgwè inye ndụmọdụ banyere otú ike a na profaịlụ na oji nti utịp, otú ahụ ghara imetọ ya na ihe na-atụ anya mgbe akpa online.
Jikọọ free >